“အတွေးစလေးတွေ”: စာပေတောသား ဦးဟန်ကြည် . . .
Posted by Han Kyi at 11:57:00 pm
အညတရလေးတစ်ယောက် လာဖတ်သွားပါတယ် ဆရာဟန်ရေ ... :)
30 August 2013 at 05:18
NYI NYI PE (BKK) said...
I have visited your blog and read your post with admiration. Thanks.
N N PE (BKK)
စဖတ် ဖတ်ချင်းမှာတော့ ရှည်လွန်းလို့ ပြီးပါ့မလားလို့ထင်နေတာ
ဆုံးတဲ့အထိ တကယ်ကိုပြုံးစိစိဖြစ်ခဲ့ရလို့ ကျေးဇူးပါဆရာရေ.....
စတဲ့ စတဲ့ စတဲ့
စာပေပညာရှိတွေလဲ စာပေတောသား အညာသားတွေဘဲ မဟုတ်ပါလား ဆရာဟန်။
အညာသားစာပေက အခုမှမဟုတ် ဟိုယခင်ကထဲက တောက်ပြောင်ခဲ့ကြတာဆိုတော့ ဆရာဟန်လဲ...
စာပေတောသားပေမဲ့ မြန်ပြည်တောလားဆရာကြီးတွေလို ကမ္ဘေကမ္ဘာမှာ စလေဆရာပုံစံမျိုး ဂုဏ်မညှိုးလောက်ပါဘူး ဆရာဟန်။
သူကြီးမင်းကတော့ ကိုယ့်နားရင်း ကိုယ်အုပ်ပြီး ကိုယ့်ငပျင်းကိုယ်ထုတ်နေလေရဲ့ဗျာ။း)